May 4, 2012 Keenya: Baaris Ciidamada Nabadsugidda Xadgudubyo loo Geystay Dadka Asalkoodu Soomaaliada yahay Milatariga, Boliiska, oo ka Geystay Kufsi, Jir-dil, Dhac,Gobolka Waqoyi-Bari Languages
Warbixinta waxa ay ku saleysantahay wareysiyo aan la yeelanay 55 dhibaneyaal kuwaasoo u badan dadka asalakooda Somaalida yahay, ee ku nool magaalooyinka Garissa, mandera, Wajeer xadgudubyada ay u geysteen ciidamada nabadsugidda marka lagu daro 20 qof oo qaxooti Somaali ah. Sidoo kale waxey Human Rights Watch wareysiyo kaladuwan la yeelatay qeybo ka tirssan mas-uulyinta booliska iyo milatariga, mas-uuliyiinta maamulka deegaanka, xubno ka tirsan baarlamaanka, iyo wakiilka Heyadda Qaramadamidoobay ee Qaxootiga (UNHCR), iyo ururada bulshada ee deegaanka Waqoyi-Bari. Xadgudubyada ay ciidamada Difaaca ee Kenya ka geysteen Garissa waxa ay bilawdeen kadib markii ay dheceen dhowr weerar oo bambo gacmeed ah bartamihii November, sida ay Human right Watch ka warheyso. Dhamaadkii November ayaa ay askartu bartilmaameed sadeen guryo qaas ah oo la daganyahay, galitaanka xeryaha iyo iney garaacaan dadka halkaa ku sugan, marka lagu daro wiil arday 16-jir ah kaasoo gacanta ay ka jabiyeen intii uu weerarkeedu socday. Intii u dhexeysay Nofembar iyo Janaayo ciidamada militariga ee ku sugan xerada Garissa ayaa hareereeyay shacab tiro badan iyo waliba darawaliin baabuurtooda dhigtay meel xerada ku dhaw, xadgudubna u geystay, iyagoo ku eedeeyay in ay yihiin “al-shabaab” dadka dhibaatada loo geystay ayaa sidoo kale waxaa lagu qasbay in ay dul-fariistaan biyo wasaq ah intii ay baaristu ku socotay, in ay ku galgashaan dhulka xerada militariga dhexdeeda, iyo in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo“exercises,” sida in ay u bodaan raha oo kale gees ka gees xerada dhexdeeda iyo in ay hal far dhulka inta ay ku mutaan ku wareegsadaan. In badan oo ka mida waa la jirdilay inta aanan lasoo deyn ka hor. Dhamaantoodna dambi waa lagu waayay.
17-jir waardiye ah oo ku nool Garissa oo ay garaaceen askarta Kenya ayaa u sheegay Human Rights Watch, “wax suaalo ah nama aysan weydiin, waxa ay bilaabeen in ay na garaacaan. Xitaa magacyadeena nama weydiin. Dhulka ayay na dhigeen oo na galgaladsiiyeen. Halkan wadada bartankeeda ah ayaan saacad barkeed ku galgalaneynay. Ka dib ‘eksersaaskii’, wey naga tageen, ka dibna wey soo laabteen bilaabeena iney na garaacaan mar kale. Waxey nagu garaaceen feer iyo kabahooda buudka ah. Jirkeyga dhamaan meel walba garaacista wey gaarsiiyeen meel ii nabad qabta majirto.” Wax yar kadib makii ay qaraxyadu dhaceen bishii Nofembar iyo Desember askartu waxa ay tacaddi u geysteen shacabka ku nool Mandera iyo Wajeer. Hogaamiyayaasha bulshda waxa ay ogaadeen in ciidamo Keenyaan ah oo ay taageerayaan cutubyo ciidanka booliiska Kenya iyo ciidamo ka tirsan TFG-da in ay jirdil ugu geysteen Madera dad tiradoodu gaarayso 115 qof, taasoo u jirta hal kiiloo-mitir xudduuda Soomaalya. Bishii Desember waxey si sharci daro ah u ururiyeen oo ay si xun ula dhaqmeen dad ku dhow 56 qof maagaalada wajiir, qaar wey garaaceen waxaana ay ku qasbeen dhamaantood in ay wadada ku galgashaan iyadoo ay cadceeddu kulushahay.
Region / Country Africa Kenya Somalia Topic Refugees More Reading
Somaliland: Dadka Naafada ah oo lagu Tacadiyo lana Dayaco Most Popular
Keenya: Baaris Ciidamada Nabadsugidda Xadgudubyo loo Geystay Dadka Asalkoodu Soomaaliada yahay Print